पार्टीभित्रको विवाद ओलीलाई कसरी हटाउने अनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष को–को बन्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित देखियो
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादमा फस्दै गर्दा युवा नेताहरु भने अन्यौंलमा देखिएका छन् । युवा नेताहरु विवाद समाधानको निमित्त भन्दा विवादको विषयमा कित्ताकाट भएर एकले अर्कोको उछिटो काढ्ने तहमा मात्र प्रस्तुत छन् ।
पार्टी विवाद विभाजन उन्मुख तहमा पुग्दै गरेको चर्चा भईरहँदा पनि नेकपाभित्रका युवा नेताहरुको भूमिका भने खासै अपेक्षाकृत छैन् । उनीहरुले विवाद सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि भूमिका खेल्न सकेको देंखिदैनन् ।
पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नेकपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय यूवा संघ नेपालका सह–संयोजक रमेश पौडेलसँग हामीले पार्टीको आन्तरिक विवाद र समाधानको विषयमा केही छलफल गरेका छौं । युवा संघका नेता पौडेलसँग नेकपा आन्तरिक विवादबारे संसार न्युजका तर्फबाट नारायणअर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहभागी यूवा नेतृत्वको तहबाट हेर्दा अहिले पार्टीमा भएको अन्तरविरोधलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ? खासमा पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको जड के हो ?
अहिले पार्टीमा जे विवाद देखिएको छ, यो सिद्धान्तको जगमा भएको विवाद होइन् । यो नितान्त पद र अवसरका लागि भइरहेको विवाद हो । म प्रधानमन्त्री हुन्छु कि हुन्न, म पार्टी अध्यक्ष हुन्छु कि हुन्न, म राष्ट्रपति हुन्छु कि हुन्न, अरु मात्रै किन भइरहने म चाहिँ किन नहुने, म पो हुनुपर्यो भनेर गरिएका विवाद हुन् ।
अहिले पार्टीमा भएको विवादले चुनावमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारामा मतदान गरेका मतदाता अर्थात कम्युनिष्ट राज्य वा पुर्विय दर्शनको आधारमा भन्दा रामराज्य चाहने नेपालीहरुमाथि प्रहार गरिरहेको छ । अहिलेको विवाद केपी ओलीलाई पार्टी र प्रधानमन्त्रीबाट कसरी हटाउन सकिन्छ र अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सीमित छ ।
म तपाईंको मिडियाको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी त कार्यकर्ताको रुपमा बोक्दै आएका हौं भोली पनि बोक्छौं । हामीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षको कुर्चीमा आँखा लगायौं भने त्यो तपाईंहरुको लागि स्वीकार योग्य हुँदैन् । तपाईंहरुले नै भागवण्डा मिलाउनुस खानुस तर कृपया आदरणीय नेताहरु अस्थिरताको खेलमा नलाग्नुस ।
यो देशका प्रतिक्रियावादी र दक्षिणी शक्तिले निकै अस्थिरता चाहिरहेका छन् । उनिहरुले विभिन्न खेलहरु खेल्न खोजिरहेको हामीले सँधै देखेका छौं । हाम्रा नेताहरु तिनिहरुको ऐजेन्ट वा कामदार जस्तो नबनिदिनुस ।
हामीले सर्वहारा, मजदुर, किसान, उत्पीडित तथा समाजको सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधिको रुपमा तपाईंहरुलाई देखेका हौं, यहि मानेमा नै हामीले तपाईंहरुलाई नेता मानेको हो । तर, तपाईंहरुको चालढाल हेर्दा त हिजो राजतन्त्रको पालामा सत्तासँग जोडिएर विभिन्न प्रकारका पर्व वा घटनाहरु घट्ने गरेका थिए, जो राजपाठ कब्जा गर्नको लागि एकले अर्कोलाई हत्या गर्ने गरिन्थ्यो । त्यहि नै प्रकारको सिको तपाईंहरुले गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । राजपाठ हत्याउनका लागि नै हतियार नबोके तापनि अहिले देखिएको घेराबन्दी त्यस्तै प्रकारको छ ।
नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमाथि चर्चा गर्दै गर्दा सरकार र पार्टी सञ्चालनको विषय पनि जोडिएर आउँछ । तपाईंलाई के लाग्छ, सरकार र पार्टीले सहि दिशा लिएको छ ? के ओली नेतृत्वको सरकारको काम गराई घोषणा पत्रमा लेखिए जस्तै छ ? के सरकार विवाद रहित बन्न सक्यो ?
पछिल्लो चुनाव विगतमा भए हुनेगरेका चुनावको स्तरको थिएन । तत्कालिन माओवादी विद्रोह र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको आधारमा बनेको संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि वर्तमान सरकार निर्वाचित भएको थियो । यो सरकारले हिजोको आन्दोलनको जनादेश र अहिलेको आवश्यकताको आधारमा केहि महत्वपुर्ण काम अवश्य गरेको छ । सरकारले गरेको कामलाई केही विषयगत रुपमा पनि चर्चा गर्न सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा : सरकारले तत्कालिन माओवादी विद्रोह र जनआन्दोलन आधारमा बनेको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपुर्ण काम गरेको छ । हामीले देख्न सक्दछौं यो सरकारले संघियताको सवाललाई महत्वपुर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरेको छ, जसमा आवश्यक कानुन बनाउने, कर्मचारीको समायोजन गर्ने लगायत अति महत्वपुर्ण एवं संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ ।
राष्ट्रियताको सन्दर्भमा : यो सरकारले पहिलो, राष्ट्रिय भावधारा मजबुद बनायो । हामीले हाम्रो काम हामी आँफै गर्न सक्छौं भन्ने कुरा स्थापित गर्यो । शक्ति राष्ट्रहरुसँग समानताको व्यवहार गर्ने कुरामा आफ्नो विचार र व्यवहार प्रस्तुत गर्ने काम गर्यो ।
दोस्रो, अहिलेसम्म नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुकको रुपमा रहेको थियो र हाम्रो बुझाई पनि त्यहि खालको थियो । वर्तमान सरकारले सो मान्यतालाई बदल्दै नेपाल भुपरिवेष्ठित होइन भुजडित मुलुक हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । अहिसम्म हाम्रो हिन्द महासागरसँग मात्रै पहुँच थियो अब हाम्रो प्रशान्त महासागरमा पनि पहुँच स्थापित भएको छ । चीनमा समेत हाम्रा सुख्खा र सामुन्द्रिक बन्दरगाहको स्थापना हुने क्रम अगाडि बढेको छ ।
सरकार संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अगाडि बढेको छ, तर प्रतिपक्ष वा अन्य राजनैतिक शक्तिहरुबाट भन्दा पनि पार्टीभित्र सिर्जना भएको विवादका कारण उपलब्धिलाई छायाँमा पार्ने काम भएको छ ।
तेस्रो, बोर्डरमा अहिलेसम्म राजाहरुले समेत सिमानामा राख्न नसकेको बिओपी यो सरकारले राख्ने काम गरेको छ ।
चौथो, महत्वपुर्ण काम तत्कालिन समयमा भारत–चीनबीच युद्धको क्रममा नेपालले आफ्नो जमिन भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको थियो, सम्झौतामा पछि नेपाललाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो तर भारतले पछि फिर्ता गरेन् । त्यो भुमि हाम्रो हो भनेर यो सरकारले नक्सा नै सार्वजनिक गर्ने काम गरेको छ ।
पाँचौ, प्रधानमन्त्रीले पुर्विय दर्शनको विकासको विषयमा ऐतिहासिक आधारहरु प्रस्तुत गर्दै महामानव बुद्ध मात्रै होइन भगवान राम पनि नेपालमा जन्मिएका हुन भनेर बहस प्रारम्भ गर्नुभएको छ ।
विकास अवधारणाको सन्दर्भमा : विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा नयाँ अवधारणा र कार्यक्रमलाई यो सरकारले अगाडि बढाएको छ । मुलतः नेपालको विकासमा विकासका ३ वटा धारा स्थापित भएका छन् । पहिलो, विपीले अगाडी सार्नुभएको प्रत्येक नेपालीको परिवारमा कम्तिमा एउटा सानो घर होस, एउटा गाई होस् भन्ने प्रकारको समाजवादी विकासको विचारधारा ।
दोस्रो, तत्कालिन राजा महेन्द्रले अगाडि सार्नुभएको विकासको विचारधारा, गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य मानिसको ५ वटा आधारभुत आवश्यकता हो र यो जनताले प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्दछ । तेस्रो अहिले केपी ओलीले अगाडी सारेको विकासको विषयमा अगाडि सारेको विचार हो । उहाँका अनुसार अब समाजवादमा जाने भनेको हरेक क्षेत्र, कृषिमा अधिक उत्पादन, फराकिला राजमार्ग, विशाल एयरपोर्टजस्ता बृहत विकासको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । जसरी अहिले राजमार्ग, करिडोर, रेलमार्ग, एयरपोर्टलगायतको विषयमा तिव्र तहमा काम भइरहेको छ ।
समग्रमा सरकार संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अगाडि बढेको छ, तर प्रतिपक्ष वा अन्य राजनैतिक शक्तिहरुबाट भन्दा पनि पार्टीभित्र सिर्जना भएको विवादका कारण उपलब्धिलाई छायाँमा पार्ने काम भएको छ ।
पार्टीको अन्र्तविरोधलाई लिएर संगठनका युवा पंक्ती र आम जनतावाट तपाईंले कस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ र कस्तो जवाफ दिनुभएको छ ?
जसरी अहिलेको विवादको चित्र देखिएको छ, त्यसरी नै पेचिलो र तिखो प्रश्नहरु मसँग आउने गर्छन र आएका छन् । मैंले सबैलाई के भन्ने गरेको छु भने हामी कोही पनि कसैको भरिया बन्ने काम नगरौं । सत्यलाई सत्य भनौं झुटलाई झुट भनौं । सत्यलाई सत्य भन्दा र झुटलाई झुट भन्दा नै समस्याको सामाधान हुन्छ र हाम्रो पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सकिन्छ ।
पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किरहँदा, युवा पंक्तीका नेताहरु भने कित्तामा बाँडिएर एकले अर्कोलाई खेदो खन्ने काम गरेको देखिन्छ । युवाहरु किन सिर्जनशील बन्न सकेनन् ? किन पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय ल्याउन सकेनन् ?
म साँचो मात्रै बोलिरहेको छु, म झुटो कुरा बोल्दिन । अहिले मैंले के मात्रै भनिरहेको छु भने भरिया बनेर प्रस्तुत हुने साथिहरुलाई त्यसो नगर्नुस भनेको मात्रै हो । म एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले नेतृत्व पंक्तीले गरेको नकारात्मक शैलीको मात्रै आलोचना गरेको हुँ ।
दोस्रो, हामीले नेताहरुलाई गलत कुरा छोेड्नुस र सहि मार्गमा आउनुस भनेर निरन्तर भनिरहेका छौं । कम्युनिष्ट पार्टीमा एकता, संघर्ष र रुपान्तरण चलिरहन्छ । तर, विना सैद्वान्तिक धरातलमा उभिएर एकले अर्कोलाई प्रहार गर्ने कार्यले त निकास दिँदैन । यो पार्टी एकतावद्ध बनाएको ओली र प्रचण्डले हो, त्यसैले केपीले प्रचण्डलाई र प्रचण्डले केपीलाई हिर्काउने कुराले राम्रो गर्दैन ।
अहिले हाम्रो पार्टीको विधानले नै बहुमतको कुरा गर्दैन तर बहुमत अल्पमत निर्माण गरेर केपी ओलीलाई हटाउने कुरा जे जसरी भइरहेको छ त्यो पार्टी मात्रै होइन राष्ट्रको समेत हितमा छैन् । सामान्य कुराहरुमा अल्पमत बहुमतको विषय निर्माण गर्न सकिन्छ तर विशाल कम्युनिष्ट पार्टी, स्थिर राजनीति र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सबालमा त यो मान्य हुन सक्दैन । अहिले जसले बहुमत वा अल्पमतको कुरा गरिरहेको छ त्यो फुटवादी हो । हामीले पार्टी कुनै पनि हालतमा फुटाउनु हुँदैन जुटेर जानुपर्दछ भनेर हामी संगठनको तर्फबाट सबै नेतृत्वलाई भेटेर भनेका छौं । समस्या हामीले सिर्जना गरेको होइन । माथि नेतृत्व तहबाट समस्या शुरु भएपछि कित्ता भएको हिसाबले हाम्रो भुमिका र प्रस्तुति पनि केहि प्रभावित भएको मात्रै हो । तर, हामी युवाहरुको बीचमा कुनै समस्या छैन् ।
अहिले हाम्रो पार्टीको विधानले नै बहुमतको कुरा गर्दैन तर बहुमत अल्पमत निर्माण गरेर केपी ओलीलाई हटाउने कुरा जे जसरी भइरहेको छ त्यो पार्टी मात्रै होइन राष्ट्रको समेत हितमा छैन् । सामान्य कुराहरुमा अल्पमत बहुमतको विषय निर्माण गर्न सकिन्छ तर विशाल कम्युनिष्ट पार्टी, स्थिर राजनीति र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सबालमा त यो मान्य हुन सक्दैन । अहिले जसले बहुमत वा अल्पमतको कुरा गरिरहेको छ त्यो फुटवादी हो ।
हामीले त यो विवाद छिटोभन्दा छिटो हल हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । मैले पार्टीमा रहेका कित्ताहरुमा अलिक राम्रो, राष्ट्रवादी र वैज्ञानिक कित्ता केपी ओलीको हो भन्ने मानेको छु अरुले अरु कित्तालाई मानेका छन् । हाम्रो अभिव्यक्तिमा देखिएको फरकपनाले कुनै समस्या पार्दैन मुलरुपमा ओली र प्रचण्डको तहमा एकता हुनुपर्यो ।
युवा नेतृत्वको तहबाट हेर्दै गर्दा, पार्टीभित्रको पछिल्लो अन्तरविरोधलाई हेर्दै गर्दा वर्तमान सिर्जित समस्या समाधान गर्न कति सम्भव छ ? कति सहज छ भन्ने लाग्छ ?
सम्भव छ र हुनुपर्छ । पार्टी एकताको विकल्प हामीसँग छैन् । केपी र प्रचण्डको एकताले नै समस्याको सामाधान गर्छ । अहिले बामदेव गौतमले अगाडि सार्नुभएको प्रस्ताव नै सहि रुपमा आएको छ । त्यसलाई बृहत्तर ढंगले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्दा नै सबै समस्याको सामाधान हुनसक्छ ।
मेरो प्रस्ताव के छ भने छिटोभन्दा छिटो पार्टीको महाधिवेशन गरौं । अबको महाधिवेशनबाट हिजोसम्म पार्टी सञ्चालन गरेका नेतृत्वहरुले अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । अब हामी यूवापुस्ताले पार्टी सञ्चालन गर्छौं । उहाँहरु भन्दा हामीले अब्बल ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्छौं ।
होइन भने हिजोको समयमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिसकेका वा टेस्ट भइसकेकाले दाबी गर्न मिल्छ ? अबको महाधिवेशनवाट टेस्ट भइसकेकाले बिदा लिएर सल्लाहकारको भुमिकामा बस्नुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्रै हामीले यो पार्टीलाई समाजवादको उद्धेश्य प्राप्ति गर्दै अनन्तकालसम्म अगाडि बढाउन सक्छौं ।